Arbetsförmedlingen oo dad badan siisay lacago qalad ah | Somaliska
Baaritaan lagu sameeyay lacagaha uu bixiyo Xafiiska Shaqada (Arbetsförmedlingen) ayaa lagu soo bandhigay in mudo 14 sano ka badan ay bixinayeen lacago qalad ah. Lacagahaan oo ah taageerada loo yaqaan Aktivitetsstöd ayaa la sheegay in dad badan la siiyay lacago dheeri ah halka kuwo kale la siiyay lacago yar.
Tirada dadka ay saameysay arintaan ayaa lagu sheegay in ay gaarayso boqolaal kun oo qof. Maamulka xafiiska shaqada ayaa hada sheegay in aysan lacag siin doonin dadka la siiyay lacagaha yar balse ay ka fikirayaan sidii ay lacag celin uga dalban lahaayeen kuwa qaatay lacagaha dheeriga ah. Arintaan ayaa saamayn ku yeelanaysa Hay’ada Caymiska Shacabka (Försäkringskassan) iyo shirkadaha bixiya lacagta shaqo la’aanta A-kassa oo laga yaabo in ay dadka qaar ka dalbanaan lacag celin.
Wasiirada arimaha shaqada Elisabeth Svantesson ayaa arintaan ku tilmaamtay mid aad qatar u ah, iyadoo ugu baaqday xafiiska shaqada in ay baaritaan ku sameeyaan dhamaan kiisaska oo dadka lacagaha loo celiyo.
Si kastaba ha ahaatee, Arbetsförmedlingen ayaa hada sheegay in ay la xiriiri doonaan dadkii lacagaha yar la siiyay wixii ka bilowda 2012 kuwaasoo laga yaabo in la siiyo lacagaha ka dhiman.
Ma ahan markii ugu horeysay ee ay fadeexad iyo farsamo xumo la soo gudboonaato Xafiiska Shaqada oo ka mid ah Hay’adaha ugu sumcada dhamaan hay’adaha dowlada Sweden.
Makujiran kuwa cusub oo 2da sano ah oo etablers ka ah
waa run aniga bishii afaraad waxaan sfi aaday 5 maalin oo kliya ka dibna waan dhalay warqada raatibkane waxaan saxiixay 5taas maalin keliya markeey lacagta soo dhacdayna waxaa ii timid 7500kr handaleegaradeeyne fasax ayeey ku maqan tahay oo waxaan tel udiray naagta kamuunka u fadhiso oo soo galootiga caawiso waan usheegay oon ku iri kaliya waxaan xaq uleeyahay intaan soo shaqo tagay .waxeey iigu tiri waa sax waxaan la hadlaa handleegaradaada iyo forsakringskasan oo iyagaa celinaayo inta kusoo raacday.inkastoon ubaahnaa lacagtaas hadane tii ilaahay iyo beri dhib iiga imaan karo ayaan ka fikiray alx …
yaa aqbaar ka haayo arntii reer labo sano maskaxdaan ka daalnay fikir daraadiis ilaahoow wax qeer qabo soo naadi yaa rab .sc
Sxb yaal reer 2 sano maxaa cusub beryahaan. Maxkamadii kiiski yaalay xaguu ku danbeeyay. Qufkii war haaya so gudbi please
labo sano ayuu kuwaashay labasano warkeeda wa dhamaaday sxb sverie dad in ey keento iska dhafee kuwii horay ujoay ayaaba qaadi taaan
Arinta 2ssno sxb malmshan cid warleeda hayso lama arag. Lkn aniga shaan waxan qiyaasaa on aysan sii jirayn shuruudaas mxyelay qodob udagsan waxaada socdaalka ma ahan marka waa qof walbay nasiibka. Qofkii halkaan bariiskiisa laga qoray walee euu imaan.